Fifidianana : hanilika ny fitondrana… tsy mahomby ny vahoaka | NewsMada
Fifidianana : hanilika ny fitondrana… tsy mahomby ny vahoaka
Efa manomboka fantatra ny sasany amin’ireo kandidà hirotsaka hofidiana ho f iloham-pirenena. Efa miketrika amin’ny fomba rehetra hahazoany fandresena ny mpitondra. Ho tompon’ny teny farany anefa ny vahoaka.
Azo antoka fa hirotsa-kofidina ho filohan’ny Repoblika ny filoha teo aloha, Ravalomanana. Toy izany koa ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina Andry. Tsy atao mahagaga ny filoha am-perinasa, Rajaonarimampianina, fa mbola hanohy ny fitondrana: na efa hita fa tsy mahomby sy mahatofoka vahoaka izao aza, manonofinofy am-pitoerana ny taona 2030.
Hanao ahoana ny fifidianana, raha tsy hiresaka afa-tsy ireo « kandidà », ohatra? Efa tsinjo sy miseholany ny fanenjanana sy fanenjehan’ny mpitondra ireo « kandidà » ireo, izay atahorany mafy. Ho tonga hatraiza? Mitohy, ohatra, ny antsojay mahazo an-dRavalomanana momba ny hetra, ny amin’ny raharaham-pitsarana momba azy…
Ho toy izany koa ny amin-dRajoelina? Itadiavana hirika hatrany izay fomba hanakanana azy fa hoe mpanongam-panjakana… Izany rehetra izany, efa mampanahy ny maro sahady ny amin’ny mety hisian’ny korontana na krizy politika; eny, na mialoha ny fifidianana ihany aza. Hanao izay fomba rehetra handresena ny mpitondra?
Ahina hangala-bato hatrany ny mpitondra
Saika efa tarazo ratsy hatramin’izay ny hoe: tsy maintsy mandresy amin’ny fifidianana izay eo amin’ny fitondrana, amin’ny alalan’ny fihetseham-bahoaka hatrany no mahaova fitondrana fa tsy ny fifidianana… Saika manao hosoka sy hala-bato tsinona ny mpitondra. Izay no nananganana rafitra manokana toy ny Ceni mikarakara ny fifidianana.
Ho hafa no ho ny fitondrana nifandimby ve ny amin’izao? Efa nampiteny ny moana sy nampitampim-bava ny hosoka sy hala-bato maharikoriko vitan’ny fitondrana tamin’ny fifidianana kaominaly sy ny fifidianana senatorialy, taona 2015. Hanaiky lembenana ny toy izany ve ny rehetra? Izay no mety ho fototry ny korontana sy krizy.
Azo itarafana izay tsy fanekena lembenana izay ny tsy fivoahan’ny lalàm-pifidianana hatramin’izao, fa tsy mahomby ny amboletra sy ny kipaipaika afitsoky ny mpitondra. Raha miezaka manilika ny « kandidà » atahorany mafy ny mpitondra, ny vahoaka no hanilika ny mpitondra… tsy mahomby sy mampahory azy. Izay io tsy fihetsehana sy fanginan’ny vahoaka io hatramin’izay ?